शास्त्र अनुसार जान्नुहोस् कुन बार कुन काम गर्दा शुभ ? – Sandesh Press
October 25, 2021 109
काठमाडौँ । हरेक व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशीले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। जन्मेको बार र राशिले उनीहरुको स्वभाव र भविष्य समेत बताउने गर्छ। त्यसैगरी तपाईको जागिर वा व्यापारमा समेत राशी र जन्म बारको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुनै पनि कार्य नोकरी वा व्यापार सुरु गर्दा आफू जन्मेको बार र राशीमा समेत ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ।
आज हामी तपाईहरुलाई सात बार मध्ये कुन दिन कुन कार्य गर्छ शुभ हुन्छन भन्नेबारे जानकारी दिन जाँदै छौँ जसबाट तपाईलाई जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने अवसर मिल्नेछ।
हरेक व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशीले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। जन्मेको बार र राशिले उनीहरुको स्वभाव र भविष्य समेत बताउने गर्छ। त्यसैगरी तपाईको जागिर वा व्यापारमा समेत राशी र जन्म बारको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ।
आईतबारः आइतबार राज्याभिषेक गर्ने , गीत, वाध्य, राजसेवा, गाइगोरु, किनबेच गर्ने , हवन गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र ,सुन, तामा, उनि, बस्त्र आदि किनबेच गर्ने रातो वस्तुको कारोबार गर्नु धेरै शुभ हुने गर्छ।
सोमबारः यस दिन भगवान शिवको प्रिय मान्ने भएकाले पनि धेरै कार्यहरुको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। विशेष गरि गाइ, भैसी, घोडा, फूल, घाँस, वृक्ष्य, मोति, चाँदी आदिको किनबेच गर्नु, महिलाको संगत गर्नु एकदम शुभ हुनेछ।
शुक्रबारः शुक्रबारको दिन गायन ,मणि , रत्न , हिरा , सुगन्ध , बस्त्र , उत्साह , अलंकार , बाणिज्य , व्यापार , गाइ–बस्तु किनबेच गर्नु , द्रव्य भण्डारण गर्नु र संचय गर्नु तथा कृषि कार्य शुभ मानिन्छ ।
शनिबारः यस दिन सुरुवात गरिएका हरेक कार्यमा शनिदेवको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ। शनिबार झुटो बोल्नु , ठगि गर्नु , कपट गर्नु , गृह(प्रवेश), स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उत्घाटन , फलाम , तरवार आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिने गर्छ ।
Prevपूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र बुहारी हिमानी शाहको यो तस्वीरलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
Nextसालिनदीस्थित स्वस्थानी मातालाई पसिना आएपछि‘
सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएपछि खुल्यो यस्तो रहस्य, कलाकार भीमा मैनालीका छोरा नुभिवलाई यसरी मा रि एको रहेछ (भिडियो सहित)-
पेटमा बोसो बढ्यो ? केही दिनमै घटाउन दैनिक खानुहोस् यी ५ खानेकुराहरु